TIKTOK မှာ နာမည်ကြီး နေသော ရွှေရည်ဝင်းထက်စံ ရဲ့ လှရက်လွန်းတဲ့ ပုံရိပ်များ …. – Shwe Yoe
TIKTOK မှာ နာမည်ကြီး နေသော ရွှေရည်ဝင်းထက်စံ ရဲ့ လှရက်လွန်းတဲ့ ပုံရိပ်များ ….
Shwe S N | August 16, 2021 | Celebrity | No Comments
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ် ရွှေရည်ဝင်းထက်စံ ကို သိကြ မယ်ထ င်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလ ည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ အင်တာဗျူးများစွာကိုလည်း လူမှု ကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ ပုံတွေကို အများဆုံးတင် အလန်းစား ပုံလေး ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူတွေများပြား ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုမှုရှိရှိနဲ့ အမိုက်စားဖြစ်လွန်းနေတဲ့ ပုံတွေတင်ပေးတတ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ရွှေရည်ဝင်းထက်စံ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေ ရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Photo Credit Shwe Yi Wint Htet San Fb Acc
ရေစိုနေရင်တောင် မိလွန်းနေတဲ့ ရင်ဖိုစရာ ပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက် တဲ့ အယ်လာ
အတွင်းသားလေးတွေ လျံထွက်နေ တဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အမိုက်စား ပိုစ့်ပေးကြမ်းနေ တဲ့ မေမြတ်သူအောင် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
လုံးတင်းနေတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကို ပေါ်လွင်အောင် ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ရဲ့ ပုံရိပ်လေး များ
ကမ္ဘာကျော် BRANDတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးနေရ တဲ့ မော်ဒယ်မေမြတ်နိုး